Al-Shabaab oo dad rayid ah ku dilay degmada Tiyeeglow – STAR FM SOMALIA
Al-Shabaab oo dad rayid ah ku dilay degmada Tiyeeglow
Wararka ka imaanaya degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool ayaa sheegaya in tiro dad ah lagu dilay tan iyo markii Al-Shabaab la wareegeen degmadaas.
Sida ay sheegayaan wararka illaa shan ruux ayaa lagu dilay degmada, kuwaasoo isugu jira Ganacsato iyo dad kale oo ku nool degmada.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dadka ay dileen Al-Shabaab ay ku eedeeyeen inay ahaayeen basaasiin iyo inay la shaqeyn jireen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq oo loo yaqaano Afaraale ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay dhibaatooyin culus ka wadaan deegaanka, isla markaana ay dad ka badan shan ruux ku dileen degmada.
Waxaa uu sheegay inay wadaan abaabulo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro Tiyeeglow, isagoo ugu baaqay dowladda Federaalka iyo Koofur Galbeed inay u gurmadaan shacabka lagu xasuuqayo deegaanka.
Boqolaal qoys oo ka barakacay degmada Tiyeeglow ayaa gaaray degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana dadkaas la sheegay in xaalado nololeed ay la soo deristay.
Waxgarad ka soo kala jeeda Galmudug & Puntland oo ku kulmay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)